Kun anoon ka deyn baan berrina, sii kordhinayaaye! Qaybta 1aad ee gabayga Af-hayeenka Sompower Tiriyay (WQ: Siciid Maxamuud Gahayr) - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Kun anoon ka deyn baan berrina, sii kordhinayaaye! Qaybta 1aad ee gabayga Af-hayeenka Sompower Tiriyay (WQ: Siciid Maxamuud Gahayr)
August 1, 2020 at 14:15 Kun anoon ka deyn baan berrina, sii kordhinayaaye! Qaybta 1aad ee gabayga Af-hayeenka Sompower Tiriyay (WQ: Siciid Maxamuud Gahayr)2020-08-01T14:15:47+02:00 ARRIMAHA BULSHADA, MAQAALLADA
Kun anoon ka deyn baan berrina, sii kordhinayaaye!
Qaybta 1aad ee gabayga Af-hayeenka Sompower Tiriyay
Shirkadda SOMPWER oo ka warcelinaysa cabashada qiimaha korontadeeda, dadkana la hadlaysa ayaa tirisay gabay nuxurkiisu yahay “HECO oo wax fudud ahayd baad jebiseen, haddii qiimaha hadalka la idiin jebiyay maxaad iigu buuqaysaan, inaan kordhiyo mooyee, halkaas ka dejin maayo qiimaha. Kootada hayaan dheer baan u galay, waana la ii saxeexay. Haddii aanan dan lahayn maxaan u midaynayay shirkadihii korontada Hargeysa? Kootayste keli-noole ah baan ahay.
Miyaad aragteen dulin iyo ayax dherga? Illaa aan karuurka dhamo, kafadaha buuxsado, koombadu tif noqoto, kayd yeesho, kumbuskaygu tiro-beelo, cid kale korontada shaarubaha gelin mayso. Shirkadahan kale ha igu soo daba faylaan”. Intan waxa ka daran qaybta 2aad ee gabayga oo ay berri soo gudbinayso. Waa qorshaheedii oo qalbiga laga akhriyay.
Waxa ay tidhi:
Kaaflayda quus-goyn muglaa, lagu kaxeeyaaye
Kamasariyo HEEKAA ahayd, kaabashkaa nuguliye
Anna kaare bira baan ihiyo, keebka taangiga’e
Keli-telisku uma joojiyeen, baaqa dhawr kuray’e
Soombaawar uma soo kishteen, kooxda cadawgaaye
Haddii koolka loo jebiyay iyo, kaadhka lacagtiisa
Korreeyaha intay mahadiyeen, ‘kaamil’ may odhane
Korontaduna waa qaali bay, qaar kaftameyeeye
Kurdigood hadday qayliyaan, kawnka Herer caawa
Kun anoon ka deyn baan berrina, sii kordhinayaaye
Kellifaadda yuuskaa dadyohow, buuqa igu kiilay
Keerkeeri maayee adaa, kaadsan oo tegiye
Kalkan Aadan Gabayguu tirshaa, ugu kalaamaaye
“Ha karaamo seegina habaar, laygu kari waaye”
Kootada dedaalkaan u galay, koobi waa gabaye
Kulligood mishiinnada inaan, goobta wada keeno
Kumannaan adduun baan u huray, kiishash lacageede
Kasbashada markaasaan dalbaday, kaalin aan geyo’e
“Keligay anaa bixin nalkaan”, keefiddii idhiye
Kulligood saxeex bay markaa, iga kireeyeene
Ayaxuba kashbici waa hadduu, laasto kaymaha’e
Inkastooy korkaagaa muddooy, dhiigna naga keento
Lama arag kutaan haagta abid, koonka jeernaba’e
Karaarkiyo qaniinyada intaa, way kormarisaaye
Kafaddaan tif noqon oo waxbaa, koombadii dhiman’e
Waagaannu kaaftoomaynnaan, loo kas garanaynne
Illaa koobku ii buuxsamoon, kaydad badan yeesho
Oo aan karuurkaa hirqado, layma kiciyeene!
Kudladdaydu jeerooy dhergaan, keefka noloshooda
Kumbuskaygu jeerooy noqdaan, dhawr leg iyo kaakac
Kaarakoone dhawr guri ah baan, laygu kicinaynne
Kabbo looma dari karo shirkado, keeska waayadane
Kuyuugayga may soo galaan, way kardhanayaane
Waxa soo socdaa yaab leh: la soco qaybta labaad IA
« TEN PUNTLAND POLITICAL ASSOCIATIONS TO CONTEST 2021 LOCAL ELECTIONS
DEG-DEG: Mid kamid ah wasiirada xukumaddii Kheyre oo ku dhaw in loo magacaabo xilka ra’isul wasaaraha dalka: »